आहा साथीको मम्मी चिक्दा | Kamsastra
आहा साथीको मम्मी चिक्दा
Sex, आहा साथीको मम्मी चिक्दा,
पहिलो दिनमा अन्टिले लाडो चुसेको सम्झेर , आज कतिबेला रात पर्छ जस्तो लागि रहेको थियो। कित बेला रात पर्छ र मजाले चिक्नु पाईन्छ भन्दै क्षण क्षण मा घडी हेर्थे , तर समय निकै ढिलो बितीरहेको थियो । १-१ सेकेण्ड १ घण्टा जतिनै लामो लाग्थ्यो । पढ्न बस्यो कि आन्टीले लाँडो चुसेको दृष्य आँखा अगाडी आउँथ्यो अनि लाँडो नै ठनक्क ठन्केर आउँथ्यो । अनि आफुले आफैलाई समहाल्थे र मन मनै कल्पना गर्थे , भरै चिक्न पाई हालिन्छ क्यारे । यस्तै गरेर दिन बिस्तारै बित्न थाल्यो । बल्ल बल्ल रातको ८ बज्यो र हामी खाना खान थाल्यौ । खाना खाईओरी रबीन र म कोठा तिर लाग्यौ । किताब निकालेर पढ्न बसे , तर पढ्न मनै लागेन । रबीन कति खेर सुत्ला र आन्टीलाई चिक्न जाँउ भई राथ्यो मलाई । साँढे ९ बजे तिर म उठ्दै भने “ल म चै सुते है , तिमी पनि सुत , बरु बिहान चाँडै उठेर पढौला , हुन्न ?” रबीनले पनि “ल ल , हुन्छ , त्यसो भए सुतौ” भन्दै उ पनि उठ्यो । उ आफ्नो खाटमा सुत्न गयो , अनि म चै अर्को खाटमा पल्टे , रबीनको कोठामा २ वटा खाट राखेको थियो । १० बजे तिर बिस्तारै रबीनलाई हेरे , उ मस्त निद्रामा थियो , कतै उठी हाल्छ कि भनेर म खाट बाट उठे अनि पानी पीउन थाले । तर उ उठेन , लाग्यो उ मस्त निद्रामा छ । अनि म बिस्तारै ढोका खोले र आन्टीको कोठा तिर लागे । शायद म आउँछ भनेर होला आन्टीले चुकुल नलगाई सुत्नु भाको रैछ । अनि बिस्तारै ढोका खोले अनि भित्र छिरेर ढोका पुनः बन्द गरे अनि भित्रबाट चुकुल लगाईदिए । आन्टी खाटमा तन्ना ओढेर पल्टी रहनु भएको रहेछ । म आएको थाहा पाएर वहाँले भन्नु भयो “आई पुग्यौ ? म अघि देखि तिमीलाई पर्खेर बसी रहेको थिए । किन ढिला गरेको नि , मलाई यहाँ कस्तो गाह्रो भईसक्यो , ल आऊ , खाटमै बस ।” म बिस्तारै खाटमा बसे , अनि आन्टी पनि उठ्नु भयो । वहाँले ओढेको तन्ना निकाल्नु भयो , आन्टी त ब्रा र पेन्टी मात्रै लाएर बस्नु भाको रैछ । वहाँको शरीर देखेर मलाई सनननन भएर आयो ।
त्यसपछि मैले आन्टिलाई फेरि खाटमा सुताए अनि खुट्टा फट्याएर मेरो ठन्केको लाँडो पुती निर पुर्याए । “ल अब गर्छु ल” मैले भने । “छिटो गर न , म तिम्रै लाँडोको चिकाईमा तड्पीरहेको छु , गर गर” आन्टीले भन्नु भयो । मैले पनि मेरो लाँडो आन्टीको पुतीमा छिराए । मैले सोँचेको थिए , आन्टीको बिहे भाको धेरै भई सकेको छ , एउटा छोरी पनि छे , पुतीको दुलो त खुकुलो होला तर वहाँको पुतीमा मेरो लाँडो सजिलो सँग नछिरेको देख्दा अचम्म लाग्यो । “ओहो आन्टी , तपाईको पुती त टाईट छ त हौ , अनि छोरी जन्माएको पुती पनि यती टाईट हुन्छ र ?” मैले सोधे । “भुँडी चिरेर जन्माको नि त छोरीलाई , तल बाट कहाँ निकालेको हो र , त्यै भएर ” आन्टीले सहजै उत्तर दिनु भयो । “ए ए , त्यसो भए चिक्न रमाईलै हुने भो” मैले मन मनै सोँचे अनि मेरो लाँडो भित्र बाहिर गर्न थाले । “तिम्रो लाँडो पनि त गजबकै छ नि , त्यै भएर पनि होला , मलाई हल्का दुख्ला जस्तो भई राछ , तर असाध्यै मजा आईराछ । जिन्दगीमा यो नै मेरो पहिलो पटको हो , यस्तो मजा गरि चिकेको । तिम्रो अंकलको त लाँडो पनि सानो , अनि चिक्न पनि नजान्ने । मजै आउँदैन” आन्टीले भन्नु भयो । “म छु नि तपाईको लागि , तपाईले चिन्तै गर्नु पर्दैन , म यहाँ बसुञ्जेल म तपाईलाई चिकी बस्छु नि , हुन्छ ?” मैले प्रतिप्रश्न गरे । “हुन्छ हुन्छ , भई हाल्छ नि” आन्टीले खुशी हुँदै भन्नु भयो । त्यसपछि मैले आफ्नो चिकाईको स्पीड बढाउन थाले । बल गरी गरी धक्का दिन थाले । आन्टी पनि तल बाट धक्का दिई मलाई सघाउन थाल्नु भयो । मलाई पनि आन्टीलाई चिक्न असाध्यै मजा आई रहेको थियो । १० मिनेट जति उतानो पारेर चिके पछि , म उठे अनि आन्टिलाई खाटबाट तल झारे । अनि आन्टीलाई घोप्टो पार्न लगाए अनि दुबै हात खाटमा टेक्न लाए । आन्टीलाई घोप्टो पारे अनि मेरो लाँडो फेरि पुतीमा छिराए । बल गरेर एकै चोटि ल्वाम्मै मेरो सबै लाँडो आन्टीको पुतीमा छिराए । “ऐयाऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽ दुख्यो हौ यसरी त , अलि बिस्तारै गरन” आन्टी कराउन थाल्नु भयो । आन्टीको पीडाको कुनै वास्तानै नगरी म बल गरी गरी चिक्न थाले । शायद अब दुखाई कम भएछ , आन्टी कराउन छाड्नु भयो र कण्डो हल्लाई हल्लाई मलाई चिक्नमा साथ दिनु भयो । यसरी चिक्दा झनै मजा आउन थाल्यो । मैले बल गरी गरी चिक्न थाले , आन्टी पनि मजा लिई लिई सुस्केरा हाल्न थाल्नु भयो “आहहहहऽऽऽऽऽऽ ओहहहहहहऽऽऽऽऽऽ सीसीसीऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽ” १० मिनेट जति यसरी चिके पछि मेरो माल झर्ने सकेत मेरो लाँडोले दियो । “आन्टी मेरो त झर्न लाग्यो , भित्रै झार्छु है ” मैले भने । “हुन्छ हुन्छ , तिम्रो तातो तातो माल म मेरो पुती भित्र महसुस गर्न चाहन्छु , भित्रै झार , चिन्ता नगर ” आन्टीले भन्नु भयो । अझ बल गरेर आन्टीलाई चिक्न थाले । १०-१५ पटक धक्का दिए पछि , मेरो लाँडोले सबै माल आन्टीको पुती भित्र ओकलीदियो । म केहि बेर हल्लिदै बसे , आन्टी पनि कण्डो हल्लाउदै मलाई साथ दिनु भयो । त्यस पछि म पुरै थाके अनि आन्टीको ढाँडमाथी नै घोप्टो परेर बसे । “बाबु , आज जस्तो मजाले मलाई जहिले पनि चिक्नु है , आज मेरो शरीरको पुरै प्यास मेटायौ तिमिले , म तिम्रो गुण जिन्दगी भर बिर्सने छैन । ” आन्टीले थकित स्वरमा मलाई भन्नु भयो । “हुन्छ हुन्छ , तपाई चिन्तै नगर्नु , म हुञ्जेल तपाईको ईच्छा पुरा गरिदिनेछु , बरु अंकल आए पछि पो कसरी चिक्नु नि?” मैले सोधे । “तिमी धन्नै नमान , म मिलाउँछु नि । मलाई थाहा छ के गर्ने कसरी गर्ने भनेर ” आन्टीले भन्नु भयो । मैले आफ्नो टाउको हल्लाए अनि लाँडो पुतीबाट बाहिर निकाले र बाथरुम तिर सफा गर्न गए । हात, मुख, लाँडो सबै सफा गरेर म कोठमा छिरे , आन्टीको कोठामै एटेच बाथरुम थियो । त्यसपछि आन्टी पनि सफा गर्न जानु भयो । त्यतिञ्जेल मै आफ्नो सबै लुगा लाएर खाटमा पल्टी रहे । आन्टी आउनु भयो अनि भन्नु भयो “छ्या…. किन लुगा लाको , खोल खोल….. सँगै सुत्ने भनेको झन , खोल खोल” । म पनि चुपचाप सबै लुगा खोले अनि फेरि खाटमा आए । अब आन्टी र म पुरै नाङगो खाटमा पल्टी रह्यौ । आन्टीले आफ्नो टाउको मेरो छातीमा राख्नु भयो , म वहाँको कपाल खेलाउँदै बसे । केही क्षण चुपचाप बस्यौ , अनि मैले भने “अब सुतौ , राती फेरि उठेर चिक्छु ल तपाईलाई” “हुन्छ सुतौ , जो उठे पनि उठाईहाल्ने है , अनि फेरि गर्ने ल” आन्टीले भन्नु भयो । यसरी गफ गर्दा गर्दै हामील कति बेला निदाएछौ , पत्तै पाईन । फेरि ब्युँझे अनि फेरि चिके , यसै गरी बिहान ५ बजे सम्म मैले आन्टीलाई ४ चोटि चिके , आन्टीको पनि प्यास मेटाए मैले आफ्नो पनि प्यास मेटाए । बिहान ६ बजे तिर म कोठमै गए र सुते
Labels: Sex, आहा साथीको मम्मी चिक्दा